Muxuu Turkigu ugu duulay waqooyiga Suuriya? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMuxuu Turkigu ugu duulay waqooyiga Suuriya?
Muxuu Turkigu ugu duulay waqooyiga Suuriya?
Ankara (JigjigaOnline) – Ciidamada Tuia ayaa waxay bilaabeen duulaan ay ku qaadeen Waqooyi bari Suuriya taai oo horseedaysa in iska hor imaad toos uu dhexmaro xoogaga kurdiyinta ee gacan saarka la leh Mareykanka.
Waxay ka dambeysay markii Mareykanka uu si lama filaan ah ciidamadiisa uga saaray xadka u dhexeeya waqooyiga-bari Suuriya iyo Turkiga.
Tallaabadaasi Mareykanka ayaa u oggolaatay milatariga dalka Turkiga in halkaasi ka billaabo hawlgal ka dhan ah isbahaysiga maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ay reer galbeedku ku garabsanayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday Dawladda Islaamka ee Daacish.
Markii taliyeyaasha ciidamadiisa iyo xulafada ku wehlida dagaalka ka dhanka ah Daacish ay walaac ka muujiyeen xaaladda Kurdiyiinta, wuxuu isla markiiba wacad ku maray in uu ” burburin doono dhaqaalaha Turkiga” waa haddii buu yiri ay weerar ku qaadaan Kurdiyiinta basle wuxuu soo jeediyay in Turkigu uu dhul gaarsiisan 20-mayl oo ku yaal xadka uu ka sameysto “aag nabdoon”.
Madaxweyne Trump ayaa markii dambe hakiyay ka bixitaankaasi, balse madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa sii waday in Mareykanka uu ku cadaadinayo sidii xudduudda Turkiga iyo Suuriya looga hirgelin lagaa “aag nabdoon”.
Haseyeeshee laba bilood uun kadib ayaa madaxweyne Trump wuxuu go’aansaday in Turkiga kaligii uu aagaasi ka sameysto xudduudda.
Turkiga ayaa sidoo kale qaadi doona mas’uuliyadda dhammaan maxaabiista kooxda Daacish ee laga qabtay halkaasi, sida uu sheegay Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo.
Isbahaysiga SDF ayaa sheegay in Mareykanka uu “dhabarka ka toogtay”, waxa ayna ka digayaan in weerarka Turkigu uu abuuri doono “aag ay ka jirto colaad joogta ah” isla markaana uu u lid ku noqonayo guushii laga soo hooyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.
Turkiga horay ma uqaaday wax talaabo ah?
Bishii Janaayo ee 2018, ayaa ciidamada Turkiga iyo mucaaradka xulafada la ah ee reer Suuriya, waxay billaabeen hawlgal ay kaga saarayaan dagaalyahanada YPG gobolka Afrin ka dib markii saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in ay ka caawinayaan SDF dhismaha ciidan cusub “oo amniga xuduudaha loogu tala galay”.
Maxaa keenay arrinta “aag nabdoon”?
Waddamada shisheeye ee xulifada la ah Mareykanka iyo mas’uuliyiinta sar-sare ee xisbiga Jamhuuriga ayaa ayaa shaki geliyay sheegashada madaxweyne Trump ee ah in laga adkaaday Daacish, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda ay wajihi karaan Kurdiyiinta haddii uusan Mareykanka difaaceyn. Maalmo ka dib, ayuu madaxweyne Trump bartiisa twitterka ku soo qoray: “Waxaan burburin doonaa dhaqaalaha Turkiga haddii ay weeraraan Kurdiyiinta….”
Bishii Agoosto, ayaa milatariga Mareykanka wuxuu sheegay in iyaga iyo Turkiga ay ku heshiiyeen qaab ahaan sidii laga yeeli lahaa arrimaha amni ee uu Turkiga ka walwalsan yahay. Waxaana lagu heshiiyay in wax laga qabto arrimaha ammaanka ee deegaannada ku teetsan xudduudda Suuriya iyo Turkiga, balse marnaba lama soo hadal qaadin arrinta “aag nabdoon”.
SDF ayaa ka digtay “weerarka aan loo qiildayi karin” ee Turkiga ee ku wajahan aagga ay Kurdiyiintu ka taliyaan, kaa oo ay sheegeen in uu saameyn xun ku yeelan doono dagaalka ay kula jiraan Daacish iyo xasilloonida iyo nabadda ay sheegeen in ay ka abuureen gobolkaasi sanadadii la soo dhaafay. “Waxaa naga go’an inaan difaacno dhulkayaga wax kastaa oo kacaba.”
Lindsey Graham oo ah xildhibaan ka tirsan Aqalka sare ee Mareykanka isla markaana ay xulufo yihiin madaxweyne Trump ayaa tallaabada Mareykanka ku tilmaamay “musiibo soo wajahan”, halka xiriiriyaha arrimaha gargaarka bini’aadanimada ee Qaramada Midoobay uu sheegay in ay “u diyaar garoobayaan dhibaato tii ugu xumayd”.
Madaxweyne Trump ayaa markii dambe ku hanjabay in uu “gebi ahaanba burburin doono” dhaqaalaha Turkiga haddii buu yiri Turkigu uu qaado tallaabo “xad dhaaf ah”.
DAGAAL: Trump oo Ilhaan Cumar ku weeraray saldhiggeeda